ỤBỌCHỊ BIAFRA NA-ABỊÁ NSO – hoo!haa!!
ỤBỌCHỊ BIAFRA NA-ABỊÁ NSO
Otù ụmụ amala Biafra bụ Indigenous People of Biafra, IPOB, n’aha nkenke enyela iwu ka onye ọbụla nọrọ na be ya n’akụkụ ala Igbo niile ma ọnwa ise n’afọa bụ ọnwa Mee dị n’abalị iri atọ. Nkea bụ maka iji cheta ma kwanyere ndi Igbo niile egburu mgbe alụrụ agha Biafra na Naijiria ugwu.
Ọbụ Mazị Emma Powerful bụ ode akwụkwọ mgbasa ozi ndi otua binyere aka n’akwụkwọ ozia.
Dika ha sịrị kwue, agaghịṅ enwe njegharị ụgbọ-ala, nke ndi mmadụ mọbụ nke ụmụ anụmanụ na steeti ise dị n’agịga mgbada ọdịda anyanwụ n’ụbọchị ahụ bụ ụbọchị ndi otu ahụ weputara maka icheta ndi agha Biafra nwụgoro anwụ.
Iji merube ụbọchị ahụ, ndi IPOB adụọla ọdụ ka ụlọ okpukpere dị iche iche dika nke ndi otu Kraist, ndi Alakụba, ndi Juu nakwa ndi ọzọ ka ha malite ekpere pụrụ iche n’ime ndeeri abalị ma ọnwe Mee dị n’ abalị iri abụọ na itolu maka emume nchetaa.
Ozia kwukwara na-aga enwe ọmụmụ anya abalị na be ndi ụfọdụ bụ ndi dike-n’ajị ndi Biafra ụbọchị ahụ.
Ndi otu IPOB kpọkukwara ndi ọdịda anyanwụ Kaduna, ọkachakwa ndi steeti Benue, Adamawa na Kogi tinyekwara ndị niile ndi nchị ehi na-akpa ike na steeti ha na mpaghara mgbada ọdịda anyanwụ ala anyị, ka ha sonyere n’ụbọchị ekpere na inọ otu ebea. Nkea bụ maka icheta na ikwanyekwara ndi niile tụfuru ndụ ha n’aka ndi nchị ehi nke Fulani na ndi nchekwa dị n’aka ugwu
IPOB sịrị n’ obụ maka ihi ndia egburu n’oge agha mere na ụmụ Naijiria ji dị ndụ taa.
Ha sịrị na-eji ndia ụgwọ ikwanyere ha ugwu, rue ọgwụgwụ oge. N’okwu ha, “anyị agaghị echefunata ha”
IPOB sịrị na ha ga-echetakwa ma kwanyere ndi niile ndi Boko Haram, ndi nchị ehi nakwa ndi nchekwa di n’aka gburu ugwu.
IPOB sịrị na nke afọa ga-abụ ọpụrụ iche makana aga-eji ya kekọrịta iru uju nakwa ihe mgbu ọtụtụ ezi n’ụlọ nwere site n’ogbugbu, agụụ nakwa ọya nke ndi obi dị n’azụ mere ha dakwasa ndi mmadụ.
IPOB kpọkuru ndi ezi n’ụlọ Biafra bigasị na mba ofesi dị iche iche,
ka ha mee ngagharị udo n’obodo di iche iche ha bi ma wegakwara ụlọ ọrụ otu mba ụwa nakwa mba ndi ọzọ dị ha nso akwụkwọ mkpesa ha.
Ha sịrị: ‘ka nnwere onwe anyị na-abia nso, anyị ga-eme emume ịnọ otu ebe nakwa ncheta nke afọa n’ụdị ọpụrụ iche’. Ha sịrịkwara, na ụwa niile na-elegara otu IPOB anya dịka ndi ga-esi n’amara Chineke zọpụta Biafra nakwa ndi niile nọ na mkpagbu n’ugwu nakwa ọdịda anyanwụ nke Naijiria.
Previous Post: EMECHIELA ỤLỌ AKWỤKWỌ NTA NA NKE SEKỌNDỊRỊ NILE DỊ NA STEETI ABIA
Next Post: ANWỤCHIELA NDI NCHỊ EHI BU NGWA AGHA…